एसईई पछिको गन्तव्य … – News Portal
July 9, 2019 epradeshLeaveaComment on एसईई पछिको गन्तव्य …
एसईईको नतिजा प्रकाशित भएसँगै विद्यार्थी यतिबेला उच्च शिक्षाका लागि आफ्नो शैक्षिक गन्तव्यको खोजीमा छन् । शिक्षाबाट आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि विद्यार्थीहरू राम्रो विषय, राम्रो विद्यालयको छनौटका लागि लागेका छन् ।
अझ भनौं एसईईको नतिजा प्रकाशित भएपछि अधिकांश विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि राम्रो विद्यालयको छनौट गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । उच्च शिक्षाका लागि नयाँ खुड्किलो मानिएको एसईईपछिको शैक्षिक यात्रा विद्यार्थीका लागि पनि बिल्कुलै नयाँ गन्तव्य मान्ने गरिन्छ । समय सान्र्दभिक तथा व्यवहारिक शिक्षा लिएर जीवनको उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा लागेका कतिपय विद्यार्थी अहिले पनि अन्यौलमा छन्, अर्थात् उच्च शिक्षाको गन्तव्यमा लाग्दै गर्दा समयसापेक्ष व्यवहारिक शिक्षा कुन हुनसक्छ ?
कुन विद्यालयमा भर्ना हुँदा अझ शिक्षाको उज्यालो गन्तव्य सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ ? यि लगायतका कुरा अहिले पनि विद्यार्थीको मनमा खेलिरहेको छ । शैक्षिक शुल्क कति लाग्ने, कुन विषय पढ्दा समयसापेक्ष बन्न सकिन्छ लगायतका कुरामा विद्यार्थीको अन्यौलता रहेको अवस्थामा आज हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला केही प्रतिनिधिमूलक शैक्षिक संस्थाका प्रमुखसँगको कुराकानीलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।
खासगरी उच्च शिक्षाका लागि तयारी रहेका विद्यार्थीले आफूलाई सरल र सहज शिक्षाको बाटोमा जान कसरी सहज हुन्छ ? कस्तो विषय छनौटमा पार्नुपर्छ ? उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयले समयसापेक्ष शिक्षा सिकाउन सकेका छन् कि छैनन् ? कस्तो शिक्षाले विद्यार्थी भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ ? लगायतका विषयमा नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा धारणा लिएका छौं ।
अभिभावकको चाहना अनुसारको शिक्षा
सर्वप्रथमतः एसईईको नतिजामा सफल हुनुुहुने सम्पूर्ण भाइबहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना । अब अहिले एसईईको नजिजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विषय छनौट,
विद्यालय छनौटमा लागेका छन् । कतिपय विद्यार्थीहरु जुन विद्यालयमा एसईई दिएको हो, त्यही विद्यालयमै अध्ययनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् भने कतिपय विद्यार्थीहरु विद्यालय परिवर्तनका तयारीमा रहेका छन् ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न क्याम्पसहरुमा भर्नाका लागि विद्यार्थीहरुको भिडभाड देख्न सकिन्छ । राप्ती बबई क्याम्पसमा पनि अहिले विद्यार्थीहरुको चाप बढिरहेको छ ।
विद्यार्थीहरुले अहिले उच्च शिक्षाका लागि सकेसम्म आफ्नो रुचिअनुसारको विषय छनौट गर्नुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी आफ्नो रुचि, क्षमताभन्दा पनि अभिभावकको चाहनानुसार वा साथीभाइको लहलहैमा पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा विद्यार्थीले साथीभाइ र अभिभावकको रुचिमा भन्दा पनि आफ्नो क्षमता र चाहनालाई आत्मसात् गरेर उच्च शिक्षाका लागि बाटो तय गर्नुपर्छ ।
कतिपय विद्यार्थीको के देखिन्छ भने सोचेभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि र अभिभावकको पनि आफ्नो बच्चाले राम्रो अंक ल्याएको देखेर हौसिने र पछि फेरी असफलता हुने गरेको पनि देखिन्छ ।
अर्को के पनि छ भने एसईईपछि केही विद्यार्थीहरु जिल्ला बाहिर जाने गरेको पनि पाइन्छ । तर मैले भन्छु अधिकांश राम्रो विषय अध्ययनका लागि जिल्लाभित्रै सम्भव छ,
होला केही विषय जिल्लाभित्र अध्ययन सम्भव नहोला तर अहिले जिल्लामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालय पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । राप्ती बबई क्याम्पस पनि सामुदायिक विद्यालय हो । यहाँ पनि थुप्रै राम्रा विषयहरु अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो क्याम्पससमा पनि कमर्स, एजुकेशन लगायतका विषयहरु अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । सामुदायिक क्याम्पस भएकाले अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्क पनि एकदमै न्यूनतम रहेको छ ।
राप्ती बबई क्याम्पस सामुदायिक भएकाले यो सबैको साझा सम्पत्ति पनि हो । त्यसले गर्दा यहाँबाट एउटा व्यक्तिले मुनाफा लिने होइन्, समुदायले नै संरक्षण गरेको हुनाले अब विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि गन्तव्य राप्ती बबई क्याम्पसलाई नै बनाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा के भने हामीकहाँ दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरुले अध्यापन गराउने हुनाले पनि शिक्षाको गुणस्तरका लागि अन्य ठाउँमा भौतारिनुपर्ने छैन् । अहिले राप्ती बबई क्याम्पसमा अधिकांश विद्यार्थी छात्राको संख्या रहेको छ ।
छात्राको व्यक्तिगत समस्याजस्तै कि महिनाबारी हुँदा क्याम्पस नै छोड्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले क्याम्पसमै निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्थासमेत गरेका छाँै । अनि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुका लागि सुविधा दिएका छौँ । खासगरी अपाङ्गमैत्री विद्यालय भवन, शौचालयको व्यवस्था छ भने पर्याप्त पुस्तकालयको व्यवस्था छ ।
हाम्रो क्याम्पसमा पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा पनि विद्यार्थीले छात्रवृत्रिमा पनि पढन् पाउँछन् । अहिले हाम्रो विद्यालय प्लस टुदेखि स्नातकोत्तरसम्म मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन तीनवटा सङ्कायमा अध्यापन भइराखेको छ ।
क्याम्पसमा बिहानी, दिवा र सन्धाकालिन तीन समयमा अध्यापन भएको हुनाले पनि विद्यार्थीले आफ्नो पायक पर्ने समयमा अध्ययन गर्न सक्नेछन् । अब हामी प्राविधिक विषय पनि क्याम्पसमा ल्याउने प्रयासमा छौँ । अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर क्याम्पसमा सिटीइभिटी तथा त्रिवि अन्तर्गतका प्राविधिक विषयहरु अध्यापन गराउने छौँ ।
रुचि र क्षमता अनुसार विषय छनौट
गुरुजजुर मावि रक्षाचौर
एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अहिले अधिकांश विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विषय तथा विद्यालय छनौट गरिसकेका छन् भने कतिपय विद्यार्थीले पनि छनौटको क्रममा रहेका छन् ।
मलाई त लाग्छ विद्यार्थीले आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडको आधारमा आफ्नो क्षमता अनुसारको विषय छनौट गर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीहरु साथीभाइले जे पढ्छ आफूले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरेको पाईन्छ ।
त्यसो गर्दा के हुन्छ भने शुरुवात गरिसकेपछि बीचैमा विभिन्न समस्या आउने हुन्छ र जसले गर्दा कतिपय विद्यार्थीले बिचमै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ भने कतिपय विद्यार्थीले निरन्तरता दिएपनि त्यत्ति सोचेको जस्तो राम्रो हुन सक्दैन् ।
विद्यार्थीले शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । अझ खासगरी विद्यार्थीले आज युग अनुसार विज्ञान विषय पनि अध्ययन गर्न सक्छन् । राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले विज्ञानसँगै प्राविधिक विषयहरु पनि अध्ययन गर्न सक्छन् ।
सबै विषयको आ–आफ्नै महत्व हुन्छ, कम गे्रड ल्याउने विद्यार्थीले मन खिन्न गराउनुपर्दैन । किनभने शिक्षाको दौडानमा आफूलाई सकेसम्म समयसापेक्ष कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने मात्र हो ।
विद्यार्थीले आफ्नो सुन्दर भविष्यका लागि जुनसुकै विषय अध्ययन गरेपनि हुन्छ । आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार उनीहरुले आफूलाई चिनाउन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ भने विद्यार्थीले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनु नै हो । त्यसैमा आफू अनुकूल र समयसापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विद्यार्थी सोच्नुपर्छ ।
अभिभावकको रुचि चाहनाभन्दा पनि आफूले गर्न सक्नेजति मात्रै विद्यार्थीले विषय छनौट गर्नुपर्छ । अहिले उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरु रहेका छन् । हाम्रो शिक्षण संस्था पनि विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि भर्ना शुरु भएको छ ।
एकदमै न्यूनतम शुल्क अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । तपाईहरुलाई थाहा नै छ गुरुजजुर मावि भनेको कस्तो विद्यालय हो भनेर ? हाम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भाइबहिनी भर्ना भइसकेपछि पछि गएर पछुताउनुपर्ने अवस्था छैन् ।
गुरुजजुरमा अहिले शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञान र ऐच्छिक विषयहरु पनि अध्यापन भइरहेको छ । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु पनि लामो समयदेखि अध्यापन गराउनुभएको छ । अनि विद्यालयमा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पर्याप्त रहेको छ ।
हाम्रो विद्यालयमा आर्थिक अभावमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुलाई विषेश व्यवस्था पनि गरेका छौँ । जसले गर्दा विद्यार्थी आर्थिक अभावमा शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन् । हामीले शिक्षालाई समय सापेक्ष अनुसार लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
विद्यालयमा अहिले पनि प्रोजेक्टरबाट अध्यापन हुने गरेको छ भने शिक्षक तथा विद्यार्थीको निगरानीका लागि सिसी क्यामराको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । पर्याप्त खेलमैदान, स्वच्छ खानेपानी, विद्यार्थी विद्यालय परिसरमा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै पनि नराम्रा गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँदैन् ।
म के भन्छु भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रको महत्वपूर्ण शैक्षिक गन्तव्य मानिएको हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनका लागि भर्ना खुलेको छ । समयमा नै आएर भर्ना भईदिनुहोला । धन्यवाद ।
दैनिकी सहज बनाउने शिक्षा
प्रकाश कुमार शर्मा
जनज्योति विद्यामन्दिर घोराहीएसईई परीक्षा विद्यार्थीहरुको मूल ढोका हो । अहिलेको अवस्थामा एसईईपछि खासमा विद्यार्थीहरु कुन विषय पढ्ने भन्ने अन्यौलमा पनि छन् ।
यहाँ कुरा के भइदिन्छ भने धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थी अभिभावक विषय छनौट गरेको अवस्था छ भने कम अंक ल्याउने विद्यार्थीले न आफै विषय छनौट गर्छ न त अभिभावकले नै छनौट गरिदिएको अवस्था छ ।
अहिले पनि अधिकांश विद्यार्थी शैक्षिक संस्था, विषय आफ्नो रुचि र क्षमतानुसार भन्दा पनि साथीभाइको लहलहैमा छनौट गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले दीर्घकालिन लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन् ।
विद्यार्थीले दृढ संकल्पका साथ म यो विषय अध्ययन गर्छु र म भविष्यमा यसैमा दक्षता हासिल गर्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ अध्ययन गर्न नसक्दा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ व्यवहारिक हुन सकिरहेको छैन् ।
शिक्षा हासिल गरिसकेपछि जागिर खानुपर्छ भन्नेभन्दा पनि आफ्नो दैनिकीलाई कसरी फरक र सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीले आफूलाई समयसापेक्ष बनाउनुर्छ ।
विगतमा विद्यार्थीले लिएको शिक्षा केही मात्रामा प्रभावकारी देखिए पनि अधिकांश रुपमा प्रभावकारी देखिएको छैन् । कारण के हो भने विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको विषय छनौट गर्न नसक्दा पनि हो ।
अर्को विद्यार्थीको शिक्षामा प्रभावकारिताका लागि विद्यालय छनौटमा पनि भर पर्छ । विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक गन्तव्यलाई सफलताको विन्दुमा पु¥याउन विद्यालयको पनि सही छनौट गर्नुपर्छ ।
विशेषगरेर हाम्रो विद्यालयले पनि गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । हाम्रो विद्यालयले २०५८ सालमै त्यतिबेलाको एसएलसी परीक्षामा जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका थियौँ ।
त्यसपछि लगातार विद्यालयले जिल्ला, राष्ट्रमै विभिन्न पुरस्कार पनि हासिल गरिसकेको छ । अहिले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै अझ भनौ विद्यार्थीले असल शिक्षासँगै असल संस्कार पनि सिक्न आवश्यक छ ।
किनभने विद्यार्थीले शिक्षामात्र हासिल गरेर पुग्दैन् उसले असल संस्कार सिक्न सक्यो भनेमात्रै उसले हासिल गरेको शिक्षा समाजलाई परिवारलाई पनि फाइदा पुग्छ ।
हामीले हाम्रो विद्यालयमा असल संस्कारका लागि शिक्षकहरुले गुणात्मक शिक्षासँगै असल संस्कारको विकास गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुभएको छ । हामीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई नियमित रुपमा अनुशासनको निगरानी गरिरहेका छौँ ।
अब खासगरी अहिलेसम्मको शिक्षा सैद्धान्तिक शिक्षा हासिल गरिरहेका छौँ । अब व्यवहारिक शिक्षा अर्थात् रोजगारमूलक, सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । दाङमा शिक्षा लिनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेका छन् ।
यसले पनि के थाहा हुन्छ भने दाङ शैक्षिक गन्तव्य बन्न थालेको प्रष्ट छ । एसईईमा ग्रेडिङ प्रणाली आइसेपछि शिक्षाका सुधार भएको पाइन्छ । अब हामीले हाम्रो विद्यालयमा न्यूनतम शुल्कमै अध्यापन गरिरहेका छौँ भने विद्यालयले पर्याप्त छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराएको छ ।
जसले गरिव, विपन्न परिवार, शहिद परिवारका छोराछोरीले पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यालयमा भर्ना भईरहेको अवस्था छ । शैक्षिक गन्तव्यका लागि जनज्योति विद्यामन्दिरलाई छनौट गर्न पनि आग्रह गर्दछु ।
संस्कारयुक्त शिक्षामा लगानी
विद्यानिलकण्ठ मावि घोराही
एसईईपछि विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विषय तथा विद्यालय छनौटको क्रममा रहेका छन् । मलाई त लाग्छ विद्यार्थीले शिक्षा सँगसँगै असल संस्कार सिक्नुपर्छ ।
एसईईको नतिजामा राम्रो अंक ल्याउने विद्यार्थीका कतिपय अभिभावककले मेरो सन्तान डाक्टर र इन्जिनियर बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ तर विद्यार्थीको चाहना फरक हुन्छ ।
जसका कारण विद्यार्थी अभिभावकको इच्छालाई पूरा गरिदिने नाममा उसको आफ्नो क्षमतामा ह्रास आइरहेको हुन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमतालाई स्वमूल्यांकन गरेर विषय छनौट गर्न सक्यो भने नै दक्षता हासिल गर्ने हो ।
अभिभावकले पनि सहयोग गर्ने कुरा त छँदैछ । विद्यार्थीले शिक्षा हासिल गर्ने र असल संस्कार सिक्ने विद्यालयमा नै पनि भर पर्छ । विद्यार्थीलाई असल शिक्षासँगै असल संस्कार सिकाउन हाम्रा शिक्षालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
संस्कार राम्रो दिन सकिएन भने शिक्षामात्रै राम्रो सिकाएर प्रगति हुँदैन् । मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु नेपालको शिक्षा घातक छ किनेभने यो शिक्षा प्रतिस्पर्धामा छ । जस्तै कि ५० जना विद्यार्थीमा एकजनालाई राम्रो बनाईन्छ । अरु ४९ जना विद्यार्थीलाई सुली चढाइन्छ ।
हामीले राम्रोभन्दा पनि असल बनाउने सोँचमा लागेका छौँ । विद्यानिलकण्ठ माविमा विभिन्न समयमा हाम्रा मूल्य मान्यताहरु विद्यार्थीलाई सिकाउने गरेका छौँ ।
हाम्रा संस्कारहरु अतिथिदेव भवः मातृदेव भवः पितृदेवभवःलाई अङ्गीकार गर्दै आएका छौँ । सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित विद्यार्थीलाई संस्कारयुक्त बनाउनु हामी सबैको दायित्व रहन्छ । विद्यालय र शिक्षकको अझ धेरै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने अभिभावकले पनि घरमा पठन संस्कृतिको विकास गराउनुपर्छ ।
मैले भन्न खोजेको के भने विद्यार्थीलाई पढ–पढ भनेर होइन् अभिभावककले आफै पनि विभिन्न कितावहरु पढेर बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण गराउनुपर्छ । विद्यानिण्ठ माविले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जोगाउँदै मुल्य र मान्यता बचाउनतर्फ लागेको छ ।
हामीले कक्षा कोठामा हाजिरी गराउने बेलामा एस सर भन्ने ठाउँमा नेपाल आमाको जय होस् भन्न लगाउने गरेका छौँ । विद्यालयमा नमस्कार नेपालीको संस्कारलाई विकास गर्नका लागि गुड मोर्निङ र गुड अप्टरनुन जस्ता शब्दको उच्चारणमै रोक लगाएका छौँ ।
अनि अर्कोकुरा विद्यार्थी आर्थिक अवस्थाकै कारण बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो विद्यालयमै छैन् । यदि तपाई जो पनि अभिभावक वा विद्यार्थीले पनि त्यस्तो समस्या लिएर हामीकहाँ आउनुभयो भने हामी छात्रवृत्तिमा पनि पढाउने छौँ । तपाईले पनि त्यस्ता विद्यार्थी पाउनुभयो भने हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ ।
संस्थागत विद्यालयको काम नै १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ त्यो जिम्मेवारी पूरा गछौँ । राप्ती अञ्चलमै पत्रकारिताको पढाइ हुने हाम्रो विद्यालय नै पहिलो हो । अहिले हाम्रो विद्यालयमा चार सङ्कायमा पढाउने गरेका छौँ ।
अझ विषेशगरी पत्रकारिताका विषयलाई मुल विषय बनाएर अध्यापन गराइरहेका छौँ । अन्त्यमा छोरोछोरी कस्तो बनाउने ? भन्ने अभिभावकको महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । घरमा बालबालिकाकालाई पढ् भन्न पर्दैन् तपाई पढ्नुुस् केटाकेटी आफै पढ्नेछन् र असल शिक्षासँगै संस्कारको बाटोमा हिड्ने छन् ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड गोरखालाई